(trg)="s1.1"> KDE Incwadi Yomsebenzisi Yendlela Yoncedo
(trg)="s2.1"> KDE Indlela Yoncedo
(trg)="s3.1"> I KDE indlela yoncedo iyilelwe ukwenza unikezelo eqhelekileyo i UNIX iindlela zoncedo ( umntu ne ulwazi ) cacileyo , njengeyohlanga KDE uxwebhu ( XML ) .
(trg)="s4.1"> Zonke ezesiseko KDE izicelo ziluxwebhu olupheleleyo , enkosi kwimisebenzi yeqela Loxwebhu .
(trg)="s4.2"> Ukuba ungathanda ukunceda , nceda bhalela umququzeleli Woxwebhu , Lauri Watts , ku lauri@kde.org yolwazi .
(trg)="s4.3"> Akukho lwazi lufunekayo , nje ulangazelelo nomonde .
(trg)="s6.1"> KHelpcenter liqela elipheleleyo le KDE Ufako lesiseko , kwaye ifakwe ngokhuphelo ngalinye lwe KDE .
(trg)="s7.1"> Ibhenisa Uncedo
(trg)="s8.1"> KHelpcenter ingabizwa ngendlela ezininzi :
(trg)="s9.1"> Kwi Uncedo menu
(trg)="s10.1"> Eqhelekileyo kakhulu izakuba kwisicelo .
(trg)="s11.1"> Kwi K menu
(trg)="s12.1"> Khetha enkulu K kwiqela lakho lenjongo , kwaye khetha Uncedo ukuvula KHelpcenter , uqala kwiphepha lokwamkela elingagqibekanga .
(trg)="s13.1"> Kwiqela lenjongo ethile
(trg)="s14.1"> I Kicker iqela lenjongo liqulathe ngokungagqibekanga i icon ukubiza i KHelpcenter .
(trg)="s14.2"> Kwakhona , iphepha lokwamkela elingagqibekanga liyaboniswa .
(trg)="s15.1"> Kwilayini yomyalelo
(trg)="s16.1"> KHelpcenter ingaqalwa usebenzisa i URL ukubonisa ifayile .
(trg)="s16.2"> URL s idityaniselwe i ulwazi ne umntu amaphepha nawo .
(trg)="s16.3"> Ungazisebenzisa njengokulandelayo :
(trg)="s17.1"> Ifayile yokunceda yesicelo
(trg)="s19.1"> Ivula i KEdit ifayile yoncedo , kwiphepha lemixholo .
(trg)="s20.1"> Eyobulali i url
(trg)="s22.1"> Iphepha lomntu
(trg)="s24.1"> Iphepha lolwazi
(trg)="s26.1"> Iyabhenisa khelpcenter ngaphandle kwe parameters ivula iphepha lokwamkela elingagqibekanga .
(trg)="s27.1"> I KHelpcenter ujongano
(trg)="s28.1"> I KHelpcenter ujongano luqulathe izahlulo ezimbini zolwazi .
(trg)="s29.1"> Amaxwebhu aqulathe izixhobo zawo zolawulo , ikwenza uye noba ngokwemiba ngapha koxwebhu , usebenzisa Elandelayo , Edlulileyo , Phezulu ne Ikhaya amakhonkco , okanye ukuya jikelele kwindlela encinane eyakhiweyo , usebenzisa amakhonkco aphezulu .
(trg)="s30.1"> Amakhonkco angakusa kwamanye amaqela oxwebhu olunye , okanye kuxwebhu elahlukileyo , kwaye ungaserbenzisa i Emva ( Utolo olalathe Ekhohlo ) okanye Phambili ( Utolo olalathe Ekunene ) ii icon kwibar yesixhobo ukusa ngapha kwamaxwebhu owaboniseleyo kule ntlanganiso .
(trg)="s31.1"> Izahlulo ezimbini zibonisa imixholo yendlela yoncedo , kwaye iifayile zoncedo ngakwazo , ekhohlo nasekunene ngokuhloniphekileyo .
(trg)="s32.1"> I Imixholo isahlulo
(trg)="s33.1"> I Imixholo izahlulo kwi KHelpcenter siboniswe kwicala lesandla sasekhohlo se window .
(trg)="s33.2"> Njengoko unokulindela , ungasa ibar yokuchaka , ukuqiniseka ukuba ungafunda ngokukhululeka imixholo yesahlulo .
(trg)="s34.1"> I Imixholo isahlulo sahlulwe kwizithuba ezintathu , esinye siqulathe i menu ibonisa lonke ulwazi loncedo KHelpcenter ilindele , kwaye elandelayo ekwenza ukuba u Phendla ulwazi oluthile , kwaye eyesithathu iqulathe i KDE inkcazelo yamagama emiba .
(trg)="s35.1"> I Imixholo Menu
(trg)="s36.1"> I Imixholo iqulathe amangeno angagqibekanga alandelayo :
(trg)="s38.1"> Wamkelekile kwi KDE - ukwazisa Kwimeko-bume ye K Desktop .
(trg)="s39.1"> Ukwazisa kwi KDE
(trg)="s40.1"> I KDE Isalathiso soqalo olukhawulezayo .
(trg)="s40.2"> Liqulathe utyelelo kwi KDE Ujongano noncedo oluthile neencam zendlela yokusebenza ngokubukekayo nge KDE .
(trg)="s41.1"> KDE Incwadi yomsebenzisi
(trg)="s42.1"> I KDE Incwadi yomsebenzisi ikuvavanyo olunzulu lwe KDE , iquka ufako , uqwalaselo nokwenziwa , nokusetyenziswa .
(trg)="s43.1"> Iincwadi zesicelo
(trg)="s44.1"> Elobuhlanga KDE uxwebhu lesicelo .
(trg)="s44.2"> Zonke KDE izicelo zino xwebhu kwi XML fomati , eziguqulelwe kwi HTML xa uzibonisela .
(trg)="s44.3"> Eli candelo lidwelisa zonke i KDE izicelo ngenkcazelo emfutshane nekhonkco kuxwebhu lesicelo elipheleleyo .
(trg)="s45.1"> Izicelo ziboniswa kwisakhiwo somthi esilinganisa isakhiwo esingagqibekanga se K menu , isenza lula ukufumana isicelo osikhangelayo .
(trg)="s46.1"> Amaphepha adityanisiwe e Unix
(trg)="s47.1"> UNIX amaphepha omntu akwifomati yoxwebhu eliselayinini-yakwantu yendlela ze unix .
(trg)="s47.2"> Iinkqubo ezininzi kwindlela yakho zizakubane phepha lomntu .
(trg)="s47.3"> Ukongeza , amaphepha omntu akhona kwimisebenzi yenkqubo nee fomati zefayile .
(trg)="s48.1"> Khangela iincwadi ezinamaphepha olwazi
(trg)="s49.1"> TeXinfo uxwebhu lusetyenziswa ngezininzi GNU izicelo , iquka gcc ( i C / C+ + umqokeleli ) , emacs , nezinye ezininzi .
(trg)="s51.1"> Ezimfutshane , ezisekwe kumsebenzi okanye ezinolwazi iimfundiso .
(trg)="s52.1"> i KDE FAQ
(trg)="s53.1"> Imibuzo ebuzwa rhoqo malunga ne KDE , neempendulo zayo .
(trg)="s54.1"> KDE kwi web
(trg)="s55.1"> Amakhonkco kwi KDE kwi web , zombini esemthethweni KDE website , namanye aluncedo amanxuwa .
(trg)="s56.1"> Dibana nolwazi
(trg)="s57.1"> Ulwazi lokuqhagamshela i KDE ababhekisi phambili , nendlela yokudibanisa i KDE uluhlu lokuposa .
(trg)="s58.1"> Ixhasa i KDE
(trg)="s59.1"> Indlela yokunceda , nendlela yokuzibandakanya .
(trg)="s60.1"> I Phendla isithuba
(trg)="s61.1"> Uphendlo lufuna ukubane ht : / /Dig isicelo esifakiweyo .
(trg)="s61.2"> Ulwazi lokufaka nokuqwalasela isalathiso sophendlo lukhona kuxwebhu .
(trg)="s62.1"> Kwiinjongo zolu xwebhu , sizakucinga ukuba sele unaso esi sicwangciso noqwalaselo .
(trg)="s63.1"> Iphendla iifayile zoncedo olungenamyalelo , ngenisa igama( ama ) onqwenela ukuwaphendla kwibhokisi yokubhaliweyo , khetha iinketho zakho (ukuba zikhona ) , kwaye cinezela Phendla .
(trg)="s63.2"> Iziphumo zibonisa kwisahlulo somboniseli ekunene .
(trg)="s64.1"> iinketho ezikhoyo zi :
(trg)="s65.1"> Indlela yokwenza
(trg)="s66.1"> Khetha indlela yokuphendla amagama amaninzi .
(trg)="s66.2"> Ukuba ukhetha ne , iziphumo zibuyiselwa kuphela ukuba yonke imiba yakho yokuphendla iqukwe kwiphepha . okanye ibuyisela iziphumo ukuba nayiphi yemiba yophendlo iyafumaneka , ne boolean ikuvumela uphendle usebenzisa udibaniso .
(trg)="s67.1"> Boolean isivakalisi sikuvumela usebenzise abasebenzi NE , OKANYE ne HAYI ukwenza olunzima uphendlo .
(trg)="s67.2"> Eminye imizekelo :
(trg)="s68.1"> ikati nenja
(trg)="s69.1"> Iphendla amaphepha anamagama omabini ikati ne nja kuzo .
(trg)="s69.2"> Amaphepha anenye okanye ezinye akazukubuyiselwa .
(trg)="s70.1"> ikati nenja
(trg)="s71.1"> Iphendla amaphepha nge ikati kuzo , kodwa kuphela ibuyisela ezinye ezinegama inja kuzo .
(trg)="s72.1"> ikati okanye ( inja hayi impumlo )
(trg)="s73.1"> Iphendla amaphepha aqulathe i ikati , kwaye namaphepha aqulathe inja kodwa akaqulathanga impumlo .
(trg)="s73.2"> Amaphepha aqulathe zombini ikati ne mpumlo azaku buyiselwa , amaphepha aqulathe amagama wonke amathathu akazuku .
(trg)="s74.1"> Ukuba uphendlo lwakho alubuyiseli iziphumo ozilindileyo , khangela ngononophelo awubekanga bucala umba wophendlo ongenguwo onetyelelo0 olufutshane HAYI okanye uqiniso olungenadwao .
(trg)="s75.1"> Iziphumo ezinkulu
(trg)="s76.1"> Igqiba inani elikhulu leziphumo ezibuyiselwe kuphendlo lwakho .
(trg)="s78.1"> Gqiba ukuba ufuna nje ikhonkco elifutshane kwiphepha eliqulathe imiba yakho yophendlo , okanye ufuna isishwankathelo eside .